Axmad – Page 20 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Saraakil sar sare oo katirsan milliteriga Dowladda Oo Balcad lagu dilay.
Axmad	 May 6, 2019 0
Gobolka Shabeellaha dhexe, waxaa ka dhacay dagaal culus oo dhexmaray ciidama katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dowladda federaalka. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Yaaqle oo u dhow magaalada Balcad…
Askar Xabashi ah oo ku le’day Qarax ka dhacay Hiiraan.
Axmad	 May 6, 2019 1
Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sugan qeybo kamid ah gobolka Hiiraan ayaa lala eegtay qarax xoogan, kaas oo geystay khasaare ba'an oo gaaray ciidamada Itoobiya. Qaraxa waxaa uu ka dhacay degmada Halgan ee gobolka Hiiraan, waxaana lala eegtay…
Ciidamada Uganda ee magacooda loo soo gaabiyo UPDF, waxay qeyb ka yihiin shisheeyaha duulaanka ku jooga wadankeena Soomaaliya, ee geysanaya gabood fallada xanuunka badan, waxaana Uganda lagu tiryaa dowladii ugu horeysay ee ciidameedu soo…
Afartan Ruux oo ku dhintay Dab ka kacay Garoon ku yaala caasimadda Ruushka.
Dab xoogan ayaa qabsaday mid kamid ah diyaaradaha Rakaabka ee shirkadda duulimaadyada dowladda Ruushka, xilli ay fadhisay garoonka weyn ee magaalada caasimadda ah ee Moskow. Ugu yaraan 41 ruux ayaa la xaqiijiyay iney ku dhinteen dabka…
Duqeymo ka dhacay Jiidda Qazza ee dhulka Filastiin.
Wararka ka imaanaya wadanka Filastiin ee kujira gumeysiga Yahuudda ayaa ku waramaya in xalay iyo shalay uu dalkaas marti geliyay duqeymo xoogan oo ay fulinayaan diyaaradaha maamulka Yahuudda. Duqeymahan oo ay geysanayeen diyaaradaha…